Chimwe chinhu chinoitika muApple, yechina beta yeiyo iOS 11.1 yakatangwa | IPhone nhau
Chimwe chinhu chinoitika paApple, yechina beta yeiyo iOS 11.1 yakaburitswa
Apple inoenderera mberi ichishanda nesimba zvakanyanya pakuvandudza mashandiro dzose iri kupa iOS 11 mune ese akasiyana kubvira payakatangwa. Aya ndiwo marongero avakaita kutishamisa nhasi na iOS 11.1 beta 4, yekuvandudza vhezheni yeiyo inoshanda system iyo isu zvataive tisingatombotarisira zvakadaro, saka zvirokwazvo muCupertino vari kushanda zvakaoma kwazvo kuti vachinje zvinhu.
Uye zvakare, iyi beta ine zvimwe zvakasarudzika zvatinofanira kufunga nezvazvo. Muchidimbu, kana iwe uri mukati mechirongwa chekuvandudza, unogona kugadzirisa yako iOS chishandiso kuburikidza neOTA kuenda pa11.1 beta 4 pasina matambudziko akawandisa, asi tinokurudzira zvakasimba kuti ushandise kubatana kweWiFi, iyi beta inorema kupfuura zvakajairwa.
Chii chitsva mubeta? Zvakanaka, hatizokwanisi kuziva kusvikira taenda kumberi, isu tinofungidzira kuti yakanangana nekugadzirisa mashandiro uye nekuvandudza kunotevera, nekuti inorema kutenderera 2 GB, saka tinonzwisisa kuti Apple inoda kubvisa mashandiro kubva hushingi hwekugadzirisa rimwe dambudziko rekutanga. Uye zvakare, zvese zvinonongedza kune iOS 11.1 beta 4 inogona kunge iri iyo Goridhe Tenzi, saka zvese zvaizorongwa kuitira kuti yekupedzisira vhezheni yeIOS 11.1 nezvose zvayakanakira ive yakagadzirira kana iPhone X yaburitswa, chimwe chinhu chine musoro, kunyanya kana tichifunga kuti rimwe remabasa aro akakosha ndiko kudzoka kwesarudzo yekushandisa kuburikidza neiyo 3D Kubata chiratidzo.
Saizvozvowo, iyi beta haina kuuya yega, iyo kambani yanga iine yayo inoenderana vhezheni yeOSOS 4.1, iyo isina kusanganisira mune yambiro manotsi chero nhau mune izvi. Iva sezvazvingaita, Isu tinoenderera mberi kuyedza iOS 11.1 kuti tiwane inokwanisika nhau dzinogadzirisa matambudziko ese ave kushandiswa nevazhinji vashandisi veIOS nekuchinja kwesystem, tinokuchengeta iwe uchiziviswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Chimwe chinhu chinoitika paApple, yechina beta yeiyo iOS 11.1 yakaburitswa
Ehe chimwe chinhu chinoitika, kukwana hakuna uye Apple yatanga kuzvinzwa, ivo vari panorama iyo ivo pachavo vakakwanisa kufuratira
Iyo vhoriyamu inoramba ichinditadza ini, ndeye "general" kana ini ndikaiburitsa kumusoro kana pasi mumaapps nemitambo, inozviitira vhoriyamu yemafoni, foni nezvimwe ... Zvinoitika kune mumwe munhu?
IOS 11 yakadzika zvakanyanya mukugadzirisa kupfuura IOS 10, kuchine zvakawanda zvekuita
Zvakakosha here kana ichienzaniswa na11.03?
Hongu, zvachose. Zvinotaridza kuti vari kurova iyo 11.1 pakupedzisira.
Dambudziko hombe randakaona nderekuti kana uine iPhone 8 uye yako yapfuura iPhone ine vhezheni 11.1 beta, haugone kurodha chero chinhu kubva kuICloud, kusvikira vhezheni 11.1 ye iPhone 8 yaburitswa